महन्थ ठाकुरले छाडे केपी ओलीको साथ, कम्युनिस्ट सरकारलाई धक्का ! – नेपाली संगसार
महन्थ ठाकुरले छाडे केपी ओलीको साथ, कम्युनिस्ट सरकारलाई धक्का !
नेपाली संगसार calendar_today ४ जेष्ठ २०७८, 5:02 pm
काठमाडौं । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री रहिरहन खोजिरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले साथ छाडेका छन् ।
ओलीले एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेटेर स्पष्ट बहुमत पुग्ने लेखाजोखा गरिरहेका बेला ठाकुर पक्षले सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि ओलीले विश्वासको मत लिँदा समेत ठाकुर पक्ष तटस्थ बसेको थियो । महन्थले ओलीको साथ छाडेपछि विभाजनको डिलमा पुगेको जसपामा नयाँ सहमति जुटेको छ ।
अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा सरकार गठनमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । यसको अर्थ जसपाको कुनै पनि पक्ष ओली सरकारमा सहभागी हुने छैन ।
दुबै अध्यक्षबीच तत्काल सरकारमा नजाने तर राष्ट्रिय सहमति भएमा सरकारमा जाने सहमति भएको छ ।
जसपाका अध्यक्षद्वयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बन्ने अवसर प्राप्त हुनसक्ने अवस्था भएमा सरकार गठन गर्न अगाडि बढ्न सकिने छ ।’
जसपाका नेताहरुका अनुसार राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको अभ्यास ७६(३) का प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि हुने भएको छ । केही दिनअघि जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
यस्तो छ जसपा अध्यक्षबीचको सहमति –